Nigranee | » इलामका तिम्सिना चार दशक पछि भारतिय जेलमा भेटिए इलामका तिम्सिना चार दशक पछि भारतिय जेलमा भेटिए – Nigranee
निगरानी March 14, 2021
विसं. २०३५ साल माघको महिना, नेपालको इलामका दीपक जोशी तिमिल्सिना घरबाट निस्किएका थिए तर उनी कहिल्यै घर फिर्ता भएनन् । उनी हराएको ४० वर्षपछि उनको परिवारका सदस्यले उनलाई अघिल्लो महिना कोलकाताको दमदम केन्द्रीय कारागारमा देख्न पाए । उनका भाइ प्रकाश चन्द्र तिमिल्सिनाले कोलकाता गएर उनलाई भेट गरेका छन् ।
त्यतिबेला उनी आफ्नो गाउँमा नै सानोतिनो काम गर्दथे र ज्योतिष शास्त्रमा उनको रुची थियो ।
यसबारे बीबीसी हिन्दीले समाचार प्रकाशित गरेको छ । प्रकाश चन्द्र तिमिल्सिनाले बीबीसीसँगको टेलिफोन वार्तामा भने, ‘हामीले त दाइको मृत्यु भइसकेको होला भन्ने सोचेका थियौं । हामीले नेपालको हरेक ठाउँमा उनलाई खोजेका थियौं तर केही थाहा पाउन सकेका थिएनौं ।’
उता दीपका जोशी तिमिल्सिना लगभग ४० वर्ष पश्चिम बंगालको विभिन्न जेलमा विचाराधीन कैदीको रुपमा रहिसकेका छन् । चार दशकमा पनि उनीविरुद्धको सुनुवाई पूरा हुन सकेको छैन ।
बुधबार उनको मुद्दामा कलकत्ता हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीशको डिभिजन बेन्चले सुनुवाई गर्यो । जोशाीको अर्को सुनुवाई आउँदो सोमबार हुनेछ ।
अदालतले दीपक रिहा भएर नेपाल फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
४० वर्षसम्म दीपक जोशीको जीवन रोकिएता पनि पछिल्ला केही महिनामा नाटकीय घटना भए ।
अघिल्लो वर्ष फेब्रुअरीमा नदीग्रामबाट राधेश्याम दास ट्रान्सफर भएर दमदम केन्द्रीय कारागार आए । उनलाई माओवादी संगठनसँग सम्बन्धित भएको आरोपमा १० वर्ष अघि पक्राउ गरिएको थियो । उनी सन् २०१६ मा पनि केही दिन दमदम जेलमा थिए ।
राधेश्याम दासले बीबीसीसँग भने, ‘अघिल्लो महिना फेब्रुअरीमा जब मलाई दमदम ल्याइयो तब पहिलादेखि नै परिचित दीपकजीसँग पुनः भेट भयो । जेलमा जो मानसिक रुपमा अस्वस्थ हुन्छन्, उनीहरुसँग म स्वेच्छाले परिचय गर्छु । त्यसै गरी दीपकसँग पनि परिचय भयो । कुरै कुरामा थाहा भयो कि उनी पछिल्लो ४० वर्षदेखि जेलमा छन् तर उनको मुद्दामा कुनै सुनुवाई भएको छैन ।’
जेलबाट जमानतमा छुटेपटि दासले पश्चिम बंगालको एमेच्योर रेडियो क्लबसँग सम्पर्क गरे । यो रेडियो सञ्चालकका एउटा संगठन हो ।
रेडियो क्लबका सचिव अम्बरीश नाग विश्वासले भने, ‘राधेश्याम दासले एक व्यक्ति सुनुवाई बिना नै ४० वर्ष जेलमा छन् भन्ने थाहा पाउँदा म चकित भएँ । हामीले जेल कार्यालयसँग सम्पर्क गर्यौं । उनीहरुले सुरुमा त विश्वास गरेनन् । तर पछि अनुसन्धान गर्दा उनीहरुलाई पनि थाहा भयो कि दीपक जोशी तिमिल्सिना नामका एक कैदी सन् १९८१ देखि जेलमा बन्द छन् र अहिलेसम्म उनको सुनुवाई भएको छैन ।’
हिरक सिन्हाले भने, ‘मलाई पहिला नै शंका भएको थियो कि दीपक जोशी कतै मानसिक रुपमा अस्वस्थ त छैनन् । किनभने हामीले विभिन्न अदालतबाट जतिपनि कागजात जुटाएका थियौं, त्यसमा त्यहि संकेत दिइएको थियो । तर उनीसँग कुरा गरेपछि मलाई कहिल्यै लागेन कि उनी मानसिक रुपमा अस्वस्थ छन् । तर उनी निश्चित रुपमा सदमामा भने थिए । मलाई नेपाली भाषा राम्रोसँग आउँदैन तर केही बुझ्छु । यहि आधारमा मैले उनीसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ । कुराकानीकै बीच उनले कागज कलम मागेर केही शब्द लेखे । देवनागरीमा लेखिएका ती शब्द आधा अधुरा लागेपनि वास्तवमा त्यो नै उनको परिचय थियो । एउटा गाउँको नाम, आमा बुवाको नाम, स्कूलको नाम ।’
जोशीसँग सम्बन्धित जुटाइएका कागजातमार्फत् थाहा भयो कि उनलाई सन् १९८१ मा दार्जिलिङबाट हत्याको मामिलामा पक्राउ गरिएको थियो ।
अम्बरीश नाग विश्वासले भने, ‘नेपालबाट आएर दार्जिलिङको कुनै चिया बगानमा उनले काम गरेका थिए । कुनै व्यक्तिले उनलाई जागिर दिलाउने कुरा गरेका थिए र त्यसको बदलामा उनलाई एक व्यक्तिको हत्या गर्न भनिएको थियो । उनैको कुरामा आएर दीपकले एक व्यक्तिको हत्या गर्छन् । पक्राउ पनि पर्छन् । त्यसबेला देखि नै उनी जेलमा बन्द छन् ।’
पक्राउ परिसकेपछि पनि उनलाई कहिल्यै पनि अदालतमा पेश गरिएन । कहिले बहरमपुर जेल, कहिले अलीपुर जेल, कहिले मनोरोग चिकित्सालय – यसै गरी चार दशक बित्यो ।
अदालतले बारम्बार दीपक जोशीको मानसिक स्वास्थ्यको आदेश दिएको थियो । तर त्यो रिपोर्ट कहिल्यै अदालतमा पेश गरिएन ।
ह्याम रेडियो अपरेटरको संगठनले उनको ठेगाना पत्ता लगाएर कोलकातामा नेपाली वाणिज्य दूतावाससँग सम्पर्क गर्यो ।
यसमा राज्य लिगल एडसर्भिसलाई पनि समावेश गरियो । लिगल एड सर्भिस गरिब कैदीलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्छ ।
फोन राख्नुअघि उनले सोधे, ‘दाइ रिहा त हुनुहुन्छ नि ? फर्कन त सक्नुहुन्छ नि चार दशकअघि छोडेर गएको गाउँमा, आफ्नी आमा भएको ठाउँमा, आफ्नो परिवार भएको ठाउँमा ।